तिथि मेरो पत्रु »5एक महान पहिलो अनलाइन डेटिङ छाप पार्न सुझाव
5 एक महान पहिलो अनलाइन डेटिङ छाप पार्न सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 21 2021 |3मिनेट पढ्न
मान्छे पहिलो छापे कुरा गर्दा, तिनीहरूले तुरुन्तै विचार अनुहार-गर्न-अनुहार सम्पर्क. तथापि, पटक परिवर्तन गरेको छ, कुरा एकदम पनि र पहिलो प्रभावहरू अनलाइन सम्पर्क संग ... यो अनलाइन डेटिङ गर्न आउँछ विशेष गरी जब. र, अनुहार-गर्न-अनुहार पहिलो छापहरुको लागि नियम अनलाइन डेटिङ पहिलो छापे फरक.
कहाँ तपाईंको पहिलो प्रभाव गणनाहरू: तपाईंको प्रोफाइल र तपाईंको इमेल
तपाईं डेटिङ को परम्परागत तरिका मा अनलाइन डेटिङ लागि बाहिरिनु भने, तपाईं महसुस गर्नुपर्ने पहिलो कुरा आफ्नो पहिलो छापे कुरा गर्न कहाँ जाँदैछन् छ. र, आफ्नो पहिलो छापे दुवै आफ्नो प्रोफाइल र इमेल पाइन्छ जाँदैछन्.
यो तपाईंको प्रोफाइल गर्न आउँदा:
तपाईं पहिले नै थाहा छैन भने, तपाईं एक्लो वा लागिपरेको हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ कि केही - आफ्नो प्रोफाइल सकारात्मक र उत्साहित हुनुपर्छ (महिलाका लागि प्रमुख बारी-बन्द). तपाईं पनि यो वर्तमान रहन्छ सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले अक्सर अद्यावधिक तपाईंलाई आवश्यकता हो भने (वा कुराहरू आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गरेका छन् जब). तपाईं सही बल्लेबाजी बन्द पनि धेरै जानकारी नदिई गर्न तपाईं कुराको प्रकार को बारे मा वर्णनात्मक निश्चित जस्तै हुन. सम्झना, के तपाईं अगाडी र इमेल जब आफ्नो चासो पकड गर्न चाहनुहुन्छ.
यो तपाईंको इमेल गर्न आउँदा:
अब, तपाईं सम्भाव्य "मिति" इमेल मा योजना भने, तपाईं एक हत्यारा पहिलो छाप इमेल कसरी लेख्न जान्नु आवश्यक छ. तपाईं पठाउन त्यो पहिलो इमेल न्यानो र आमन्त्रित हुनुपर्छ; के तपाईं रोचक हुनुहुन्छ भनेर प्राप्तकर्ता देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र तिनीहरूले तपाईं चिन्न गर्नुपर्छ. त्यसैले, पहिलो छाप इमेल के समावेश गर्नुपर्छ?
1 - तपाईंको इमेल अभिवादन
तपाईं कुनै को प्रोफाइल फेला तपाईं र तपाईं तिनीहरूलाई इमेल गर्न चाहनुहुन्छ निर्णय, तपाईं एक ठूलो पहिलो छाप बनाउन भन्न के जान्नु आवश्यक छ. तपाईं निम्न संग इमेल बन्द सुरु गर्नुपर्छ, "राम्रो दिन वा साँझ वा नमस्कार (प्रयोगकर्ता नाम)". व्यक्तिको प्रयोगकर्ता नाम सहि लेखिएका छ भन्ने निश्चित हुनुहोस् - तपाईं को लागि छ भने यो लेख्न. उद्घाटन यस किसिमको रूपमा न्यानो र आकर्षक भर आउछ.
यो सिद्ध पहिलो छाप इमेल लेखन आउँदा, यहाँ तपाईं मनमा राख्नुपर्छ एक टिप छ: तीन अनुच्छेद भन्दा बढी केही र केही कम से कम दुई अनुच्छेद. छोटो कुनै वा सामान्य तपाईंलाई उत्तरहरु प्राप्त छैन, र केहि पनि लामो तपाईं लागिपरेको रूपमा भर आउन खोज्नु अर्थ.
3 - साधारण भू खोज्नुहोस्
तपाईं आफ्नो प्रोफाइल मा देख्यो, कुनै शङ्का तपाईं केही कुरा समान थियो त इमेल मा यो उल्लेख. यो सामान्य मा तपाईं कि दुवै शेयर अनौठो कुरा हो भने, यो विषयमा बताउन. तिनीहरूले तपाईं देखि एक इमेल प्राप्त पछि अधिकांश मान्छे आफ्नो प्रोफाइल जाँच गर्नेछ (र हाँ, आफ्नो प्रोफाइल आफ्नो रुचि र सोख उल्लेख गर्नुपर्छ), तपाईं सधैं यस मा गणना हुँदैन.
4 - वर्णन प्रोफाइल-विशिष्ट विस्तार
अब तिमी ध्यान आफ्नो प्रोफाइल मा गएका छौं, त्यसैले तपाईं आफ्नो इमेल लेखन शुरू गर्दा, यो बारेमा विशेष कुरा उल्लेख. तिनीहरूले भएको छु या कहीं तिनीहरूले देखेका छौँ एक सिनेमाको बारेमा कुरा विचार गर्नुहोस्, आदि. र विषय सकारात्मक हुन. यो तपाईं उनलाई फिर्ता जवाफ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले सकारात्मक व्यक्तिको रूपमा भर आउने महत्त्वपूर्ण.
5 - एक सोध्नुहोस् (बस एक) प्रत्यक्ष प्रश्न
यो तपाईं फिर्ता जवाफ प्राप्त त बस एक प्रत्यक्ष प्रश्न सबै भन्दा राम्रो छ. धेरै प्रश्न अरुका कुराको खोजीनिती गर्ने व्यक्तिको रूपमा कथित सकिन्छ. हुनुहोस् पक्का प्रश्न तिनीहरूले जवाफ आपत्ति छैन कुरा हो.
यो महत्त्वपूर्ण तपाईं एक पहिलो प्रभाव बनाउन को लागि सम्झना, आफ्नो प्रोफाइल र इमेल दुवै निम्त्याउनु हेर्न आवश्यक - एक असल दाँत comb तिनीहरूलाई दुवै जाना, हिज्जे र व्याकरण गल्ती लागि देख. दुवै इमानदार हुनुहोस्, र तपाईं कि प्रारम्भिक इमेल लेख्दा, सामान्य जानकारी अडिग रहन - तपाईं को हुन्, आफ्नो उमेर, तपाईं विवाह भएको छु भने, बच्चाहरु, आदि.
पहिलो छापे सिर्फ अनुहार-गर्न-अनुहार सम्पर्क लागि छैनन्; तिनीहरूले पनि अनलाइन प्रयोग गरिरहनु. केही forethought संग, के तपाईं खोज्नु उत्तर हुन्छ कि पहिलो छाप सिर्जना गर्न सक्छ.